Vlanahụ Glanahụ Na-akpata Obi ojoo na Trailer 'Hunted' nke Shudder - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Vlanahụ rorlanahụ Na-akpata Obi Ọjọọ na Trailer 'Hunted' Trailer nke Shudder
Vlanahụ rorlanahụ Na-akpata Obi Ọjọọ na Trailer 'Hunted' Trailer nke Shudder
edere ya Trey Hilburn III January 11, 2021
Ihe ụgbọala na-adọkpụ maka Achụ nta ese nnọọ obi tara mmiri. Ọ na-ele anya na-ewere akụkọ banyere Little Red Riding Hood ma gbanye ya na ntị ya. Abụkwa m otu puku pesenti n’ebe a maka nke ahụ.
Onye nduzi ọhụụ, Vincent Paronnaud na-enyere onye a aka ma weta ihe dị nso na French extremism na ihe nkiri Bekee. Nke kachasị adọrọ mmasị, nwoke a bụkwa onye okike nke ihe nkiri dị egwu, Persepolis.
Na nchịkọta akụkọ maka Achụ nta na-aga dị ka nke a:
Ihe malitere dị ka nsị na-achụ nwoke na mmanya na-aghọ ọgụ ọnwụ ma ọ bụ ọnwụ dịka Eve (Lucie) Debay) na-abụ onye na-amaghị ama nke atụmatụ misogynistic megide ya. A manyere ya ịgbapụ ka ụmụ nwoke abụọ na-achụ ya n'ọhịa, ọ na-agabiga oke oke ya mgbe ọ na-alụ ọgụ iji lanarị n'ọzara-mana nlanarị ezughi Iv. Ọ ga-abọ ọbọ.
Achụ nta nwetara akara dị elu site n'aka Joe Bob Briggs izu ole na ole mgbe ọ tụsịrị ọnụ site na Twitter banyere ihe nkiri ọ gwuru n'ezie nke egwuru egwu na Little Little Red Riding Hood ihe.
"Shudder na-atụbe ihe mbụ na nke 14 nke na-abịa site na France ma ọ bụ Belgium ma ọ bụ Ireland – enweghị m ike ịkọ - ya na ndị na-eme ihe nkiri anụtụbeghị m, enwere ike ịkọwa ya nke ọma dị ka Wolf-Creature Stalker Torture Porn, yana nwanyị. slant na a survivalist subplot. Ọ mara mma.”Briggs kwuru.
Achụ nta kpakpando Magritte Award-emeri emume Lucie Debay (Nkwupụta) na Arieh Onye mgba (Girl), na Ciaran O'Brien na-emechi ndị na-akpachi anya
Mee ka anyị mata ihe ị chere banyere ụgbọala na-adọkpụ na ngalaba nkọwa.
Achụ nta na-abịa Shudder na Jenụwarị 14.
Kelly na Pablo na-abịa Ọjọọ Nwụrụ Anwụ: Egwuregwu! Gụkwuo ebe a.
Achụ ntaLittle Red ịnya HoodNtughari
The Creepiest Urban Legend in nke ọ bụla nke 50 States Part 9
Amazon 'Amaara M Ihe Did Mere Ikpeazụ Oge Ikpeazụ' usoro ọkwa ọkwa